रिक्सा चालक समेतको ह’त्या गर्ने यी कस्ता अ’प’रा’धीहरू? – PathivaraOnline
Home > समाचार > रिक्सा चालक समेतको ह’त्या गर्ने यी कस्ता अ’प’रा’धीहरू?
रिक्सा चालक समेतको ह’त्या गर्ने यी कस्ता अ’प’रा’धीहरू?
पर्सा, ३० पौष । यही पुस २२ गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२३ इटियाही, नारायणी बयोधा अस्पतालको पछाडि चौरमा मृ’तावस्थामा फेला परेका रिक्सा चालक भारतीय नागरिक ४५ वर्षीय मुख्तार मियाँको ह’त्या भएको खुल्न आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भारतको बिहार राज्य वैशाली घर भई हाल वीरगञ्ज–३ छप्कैया बस्दै आएका मियाँको ह’त्या भएको अनुसन्धानपश्चात खुल्न आएको हो । आपसी झ’ग’डा हुँदा फलामको रिन्चले टाउकामा प्रहार गरेर मियाँको ह’त्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मियाँको ह’त्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बिहारको पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी–६ घर भई हाल वीरगञ्ज छप्कैया बस्ने ई–रिक्सा चालक सुनिल कुमार, बारा परवानीपुर गाउँपालिका–५ बस्ने निकेश पटेल, बिहारको मुङ्गेरका घर भई वीरगञ्ज छप्कैया बस्ने सपन मण्डल, भारत बिहार घर भई वीरगञ्ज छप्कैया बस्ने नाजिर हुसैन र छप्कैया बस्ने बाबर हुसैनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले अनुसन्धानका क्रममा मियाँको ह’त्या भएको खुल्न आएको र हत्यामा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको बताए । मृ’तक मियाँ र पक्राउ परेका मण्डल एउटै घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए ।
उनीहरुबीच केही दिनअघि झगडा भएपछि मण्डलले मियाँको ह’त्या गरी फालिदिने भनी ध’म्की दिएका थिए । मण्डलले सुनिललाई भेटी मियाँको ह’त्या गर्न रु ५० हजार दिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ । मियाँको ह’त्यामा संलग्न पाँच जनालाई प’क्राउ गरिए पनि एक जना भारतीय नागरिक फ’रा’र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आजदेखि नेपालमा नयाँ सिक्का, सिक्काको आकार र विषेशता यस्तो छ…
बझाङबाट आयो दुःखद खबर: बझाङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा मृ’त्यु!